GORE B. KHAPANGI MAGAR’S INFLUENCE ON SOUTH ASIAN MOVEMENT FOR SOCIAL CHANGE AND DEVELOPMENT | The Himalayan Voice
[Today we post as it is,amemoir below by Gore Bahadur Khapangi Magar, 'a blessed orator' and charismatic leader who ledapeaceful movement for social change in the Himalayan country of Nepal. He isatowering figure of the indigenous people's movement in Nepal. Today, his influence can be felt among the far-flung ethnic communities of north and north east India and Bhutan also. Laura M. Ahearn,aSouth Asia Scholar at the University of South Carolina, United States, in her paper "We Were Kings Here Once": Gendered Constructions of Magar Ethnicity inaSpeech by Gore Bahadur Khapangi” published in Himalayan Research Bulletin XX(I) 2001 concludes “..while I am only at the beginning stages of this analysis, it seems clear to me that in this speech from 1993, Gore Bahadur Khapangi made important claims concerning ethnicity, gender, and the path Magars should take to achieve freedom. We as scholars of South Asia would do well to listen carefully to what Khapangi and other politicians say if we want to understand the constantly shifting terrain of ethnicity, caste, and power in Nepal.” - The Blogger]
पार्टीमा तागाधारी कार्यकर्ताहरुसँग गम्भीर प्रकृतिका सानातिना जातीय घटना भएको अनुभव मसँग डल्लै छन् ।
लेखक गोरे बहादुर खपांगी
आज भन्दा करिब ४० वर्ष अघि मध्येमाञ्चल विकास क्षेत्र, जनकपुर अञ्चल, जिल्ला रामेछाप, सदरमुकाम रामेछाप वजार, गौरिशंकर हाइस्कूलको प्रधानाध्यापकमा नियूक्त भएँ । जनकपुरधाममा अवस्थित नेपाल सुर्ती विकास समितिको छँदोखाँदोको हाकिमको पद छोडेको थिएँ । जे लेखेको छ त्यही हुन्छ भनेझैं भयो । प्रधानाध्यापकको खवर रामेछाप वजारको छेउमा रहेको सुकजोर मगरवस्तीमा पुगेछ । केही दिनपश्चात विद्यालय समयमा एकजना झण्डैझण्डै मेरै उमेरका मानिस मलाई भेट्न आए । म त्यसवेला ३० वर्ष भइसकेको थिएँ । उनको हुलियाको कारणवाट उनलाई मसँग भेट्न निकै संघर्ष गर्नुपरेको रहेछ । कसोकसो पियन वा शिक्षकमध्ये कसैले उनलाई मसँग भेट्न अनुमति दिएछन् । उनी प्रधानाध्यापकको कार्यालयमा पसे ।
त्यो मान्छे मेरो अगाडि ठिँङ उभियो । उनको त्यस अवस्थाको वयान म यहाँ गर्न चाहन्न । धुजाधुजा भएको स्टकोटको भित्री खल्तीवाट उनले थाङ्नाको पोको प्रअको टेवुलमाथि राखे । मैले बस्न भनें । उनी अप्ठेरो मानीमानी कुर्सीमा बसे । मैले शोधे, ‘यो के ?’ जवाफ थियो हातको शोभा । ठूलालाई भेट्न रित्तो हात जानुहुन्न । मैले त्यो सानो पोको खोलें, ग्वाहु (कुखुराको अण्डा) रहेछ ।
पञ्चायतकाल, मगर जाति सम्वन्धमा चिन्तन गर्न मलाई यो कालले रोकेन । यो जातिवारे भन्दापनि यसको अवस्था सम्वन्धमा सोंच्न थालें । समयले कोल्टो फेर्दै जानथाल्यो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले एक्कासी राष्ट्रिय जनमत संग्रहको घोषणा ग-यो । नेपालको लागि यसप्रकारको शाही कदम आफैमा नौलो थियो । वि.सं.२०३७ वैशाख मसान्तमा यो सम्पन्न भयो । यसमा सुधारिएको पञ्चायत प्रणालीले जित्यो । वहुदलीय शासनप्रणाली पराजित भयो । त्यसवेलाको शक्तिशाली पार्टी नेपाली काँग्रेसको तर्फवाट वीपी कोइरालाले परिणामलाई स्वीकार र स्वागत ग-यो । म रामेछाप वजारमा गिरफ्तार गरिएँ । गिरफ्तार गरिएकै मध्यराति हड्कडीसहित चलान गरिएँ । कहाँ लगिदै छ थाहा थिएन । वाटैमा घाम झुल्कियो । दिशापिसावको लागि अनुरोध गर्दा पर नजाने आदेश भयो । देखिनेगरि बस्नुपर्ने भयो । त्यतिमात्र कहाँ हो ! मतिर वन्दुकको संगिन पनि तेर्सियो । प्रहरीको संख्या ६/७ थियो । त्यसवेला मलाई आभास भयो, प्रअको रुपमा के गर्दै रहेको रहेछु ६ वर्षसम्म । २०३६ मंसिर २६, २७ र २८ हेटौडाको भुटनदेवी माविमा कडाईका साथ विद्यालय शिक्षकहरुको प्रथम ऐतिहासिक राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भयो । एउटा तदर्थ केन्द्रीय समिति त्यही विद्यालयका प्रअ वद्रिपसाद खतिवडाको अध्यक्षतामा गठन भयो । म संस्थापक केन्द्रीय सदस्य थिएँ । जनमत संग्रहताका रामेछाप दोलखाका शिक्षकहरु भेला गराएर भाषण गर्न थालें, वहुदलको पक्षमा । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन खोलिनु र त्यसको संस्थापक सदस्य हुनु राज्यलाई नपचेको वेला वहुदलको पक्षमा शिक्षकले राजनीतिक भाषण गर्दै हिड्नु जिल्ला प्रशासनको लागि अपराधै भएको रहेछ । यद्यपि राजा वीरेन्द्रको घोषणामा प्रत्येक नागरिकलाई यस विषयमा अभिव्यक्ति दिने पूर्ण छुट थियो । विडम्वना, व्यवहारमा यो निषेधित रहेछ । यो कार्य पञ्चायतको लागि देशद्रोह रहेछ, आफूलाई थाहै भएन । निश्चय पनि मेरो गिरफ्तारीको प्रधान पक्ष यही हुनुपर्छ । यसपछि कहिल्यै हाइस्कूल प्रअ हुने शौभाग्य पाइएन ।
१४ महिनाको जेलजीवनपश्चात वि.सं. २०४३ को आमचुनावमा नेकपा (माले)को तर्फवाट जनपक्षीय उम्मेदवार राष्ट्रिय पञ्चायतको लागि भइयो । त्यसताका जिल्ला नै निर्वाचन क्षेत्र हुनेगथ्र्यो । पराजित भइयो । तत्पश्चात म पूर्णरुपेर्ण नेकपा (माले)को कार्यकर्ता भएँ । यो पञ्चायतकाल नै थियो । पार्टी प्रतिवन्धित रहेकै वेला पार्टीले मलाई ‘फुलटाइम वर्कर’ वनाएको थियो, वापतमा प्रत्येक महिना भरणपोषणको लागि रु. १४ सय पाउथें । सो रकम दिनआउने प्रदीप नेपाल । मसँग मेरी पत्नी विद्या र ४ वटा वालवच्चा थिए । सवैजना काठमाण्डौमा थिए । चिनी केजीको रु.१२ । मुसुरोको दाल रु. ८ । राँगाको मासु केजीको रु. १० । पञ्चयात शासनको अन्त्यतिर म चिकंमुगल बस्थें ।
किराँत याक्थुङ् चुम्लुङ्ले विक्रम सुव्वाको सक्रियतामा एउटा कार्यक्रम त्रिवि शिक्षाशास्त्रको सभाभवन किर्तिपुरमा आयोजना गरेको थियो । यसमा मैले वक्ताको रुपमा अव उपरान्त हामीले वोकेको वञ्चरोको धार पञ्चायततर्फ धेरै हान्यौं, आफ्नै कम्यूनिष्टतर्फ हान्नुपर्छ भनें । यसको जवाफ उक्त कार्यक्रममा मोदनाथ प्रश्रितले यसरी राख्नुभो, ‘गुरुङ, मगर, राई, लिम्वूले धरान, विराटनगर, भैरह्वा, वुटवल आदिमा वनाएका भव्य घरहरु के वाहुनहरुले मागेका छन् ? यिनीहरुलाई पार्टीको पोलिटव्यूरो, केन्द्रीय समितिमा पद चाहिने ?’ मेरो रिस त्यस सभामा पोख्नु भो । मैले पञ्चायतको उत्तरार्धमा भन्नथालेको थिएँ कि देखिएका गैरतागाधारी पार्टी कार्यकर्तालाई प्रत्येक जातिवाट १/१ जनालाई नेकपा (माले) को केन्द्रीय समितिमा राखेमा पार्टीको गति दु्रत्तर हुदैजानेछ । यो कुरा बाहुनको नेतृत्वमा रहेको नेकपा (माले)लाई पचेको रहेनछ । पार्टीमा तागाधारी कार्यकर्ताहरुसँग गम्भीर प्रकृतिका सानातिना जातीय घटना भएको अनुभव मसँग डल्लै छन् । आवश्यकता नै आविष्कारकी जननी हुन् । घटनाहरु एकपछि अर्को ‘एक्सपोज गरिदैजालान’, आशा राखौं ।
वर्षौंपश्चात मैले रामेछापवजारको हाइस्कूलको प्रअ गोरेवहादुर खपांगीको टेवलमाथि ग्वाहु राख्ने मगरलाई सम्झें । त्यसताका सम्भवतया जनकपुर अञ्चलमै म पहिलो ‘मगर हेडसर’ थिएँ । त्यही ग्वाहु राख्ने मगरको प्रेरणाले होला, २०३९ साल १५ फागुनमा ‘नेपाल लाङ्घाली परिवार सँघ’ खोल्ने मैले औकात पाएको हुनसक्छ । श्रद्धय हेमवहादुर पुनमगर यस सँघको पहिलो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँ पोखरा रामवजार निवासी हुनुहुन्थ्यो । यो नवगठित संस्थाको माध्यमवाट मैले नेपाल दर्शन गरें । मगरको बसोबास पचहत्तरै जिल्लामा छ । यसको म संस्थापक सदस्य थिएँ । मगरको अवस्था प्रत्येक्षरुपमा बुझ्दैजादा साथसाथै यो समुदायलाई व्यूताउने कार्य पनि गर्न थालें । हिजोआज समुदायवाट समाज निर्माणतर्फ मगरहरु अघि बढ्दैछन् । व्यूतिन थालेका छन् । उठेका छन् । जागेका छैनन् । जाग्नेले आफ्नोविरुद्धमा आउन लागेको जोखिमको आभास, अन्देशा देख्नथाल्ने छन् ।
मैले यो कार्यमा लाग्नअघि वीए, डीप इन एड र ‘एमएड’सम्मको पढाइ सकेको थिएँ । अध्ययन थालें र साथसाथै व्यवहारिक क्षेत्रमा कार्यरत पनि हुनथालें । यसले मलाई म आफैले समेत रोक्न नसक्ने ज्ञानहरु ममा आउनथाले । ती थिए मेरा अनुभवहरु ।
"आफ्नो इतिहास, उत्पत्ति र संस्कृतिवारे जानकारी नहुने व्यक्ति जराविनाको रुखजस्तै हो"– मार्कस गार्भे, जमैकन नेता ।
जमैकन नेताको सारगर्भिक भनाई उदृत गर्दागर्दै पनि म मगरको इतिहास, उत्पत्ति र संस्कृतिवारे जानकार व्यक्ति चाही पक्कै पनि होइन । मगर पछि पर्नु वा पारिनुको पछाडि यिनैवारे मगरमा अद्यावधि अज्ञानता व्याप्त रहनु नै हो । अज्ञानताको पर्दा लामो समयदेखि च्यात्ने क्रममा लखन थापामगर गोरखाका, नेपाल आर्मीका कप्तान प्रथम शहिद थिए नेपालका भनी नेपाल मगर सँघको मञ्चवाट भन्दै हिडें २५ वर्षसम्म आधिकारिक रुपमा । मगर जातिसँग आदिकवि थिएनन् । स्याङ्जा कारिकोट जन्म भएका जीतवहादुर सिंजालीमगरलाई अघि ल्याइयो । नेपाल मगर सँघले आफ्नो कार्यकालमा दशै परित्याग, मगरवाट कर्मकाण्ड गराउने र मगर जातीय धर्म वौद्ध भन्ने निर्णय अगाडि ल्याइसकेको छ । मौलिकताको कारणवाट ३ सय वर्ष अघिदेखि राजकाज चलाउदै आएका मगरहरुमा गौरवको अनुभूति हुनथालेको छ । मगर जातिवारे अध्ययन अनुसन्धान गर्नुहुने जोकोहिले राजहाँसको रुप धारण गर्नुभई पानीवाट दुध छुट्याउन सक्ने गुण राख्न सक्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहाना हो, पूरा हुन नसक्ला तर मगरको आवश्यकता भने पूरा गरेकै हुनुपर्छ ।
@ Facebook Gore Bahadur Khapangi Magar